Ọhụrụ ụdị titanium-aluminum alloy lekwasịrị n'ichepụta usoro
Ugbu a, nnukwu ụlọ ọrụ na -emepụta sputtering lekwasịrị anya n'ụwa na -eji ụzọ abụọ dị iche iche arụpụta ebumnuche aluminom alloy sputtering target. Emere ya site na ịkpụzi ihe, n'oge mmepụta nke aluminom alloy sputtering zaa, mgbakwunye nke alloying ihe na -ebutekarị nkewa nke ebumnuche aluminom alloy sputtering target, nke n'aka nke ya na-eme ka ịdị mma nke ihe onyonyo na-efegharị daa ogbenye na elu nke ebumnuche na-agbagharị na-adịkarị mfe imepụta obere irighiri ihe., nke ga -emetụtakwa ịdị n'otu nke ihe nkiri ahụ. Ọ bụrụ na aluminom alloy sputtering lekwasịrị na -mere site mara ịgba akpụ usoro, ọ bụ ezie na enwere ike izere ọghọm ndị emetụtara n'elu, ọ ga -eme ka ebumpụta ebumpụta ụwa Ọnụ mmepụta na -abawanye nke ukwuu, ọkachasị mgbe ị na -eme ụfọdụ ebumnobi na -adịghị mfe ịpụ na ha ga -eji nha nha ọkụ, a ga -abawanye ọnụ ahịa ya n'ihi iji ihe ọkụ ọkụ.
Iji mee ka usoro imepụta titanium-aluminum alloy target dị mfe yana ọnụ ala, ebe a bụ usoro ịme aluminom alloy sputtering target with gas spray powder. E jiri ya tụnyere ihe ntụ ntụ nke ebumnuche na -agbasa, a na -amịnye ntụ ọka ahụ iji nweta nha ururu ntụ ntụ kwesịrị ekwesị, N'ikpeazụ, a na-etinye ntụ ntụ ka ọ bụrụ ihe na-eme ka aluminom alloy sputtering target.This usoro nke ime ihe mgbaru ọsọ aluminom alloy na ntụ ntụ ntụ nwere ike tinye n'ọrụ na mmepụta nke iche iche aluminom alloy sputtering target. (aluminum-chromium, aluminum-silicon-copper, aluminum-titanium, wdg). Usoro mmemme kachasị amasị bụ: na -enye akụrụngwa igwe maka imepụta ebumnuche aluminom alloy wee gbazee ha ka ọ bụrụ ọla; mgbe ahụ, jiri usoro ịgba gas mee ntụ ntụ igwe site na igwe a wụrụ awụ; n'ikpeazụ, kpoo uzuzu uzuzu ya na oghere A na -akpụzi ya ka ọ bụrụ aluminom alloy sputtering target material, ma gafee gas inert dị ka gas na -echebe. Usoro a nwere ike zere adịghị ike nke ikewapụ ihe na microparticles., ma mee ka ebumpụta ụwa dị elu dị ngwa ngwa na ọnụ ala.
Prev: Banyere ịgba ọkụ na -atụgharị ntụgharị Sputtering
Next: Kọwaa ihe ọmụma nke ịsụ sputtering target medium frequency magnetron sputtering